सानु, तिमि त्यति राम्री छौ अरुको नजर लाग्छ कि…… « Surya Khabar
एउटी साह्रै राम्री केटी थीईन्, जस्लाई देखे पछि मन नपराउने कोहि थिएन । उसको एक गरिब प्रेमी थियो । जो उसलाई धेरै माया गर्थ्यो। उनिहरु आपसमा खुब माया अनि विस्वास थियो । जब गरिब प्रेमीले भेट मा भन्ने गर्थ्यो, “सानु, तिम्रा सारा रहर त पुरा गर्न सक्दिन, तिमिलाई सुख दिन सक्दिन ।” महलमा राख्न सक्दिन, मेरो घरको झुपडिमा राख्दा यत्ति राम्री छौ, सबैको नजर लाग्छ होला ? म तिमिलाई सँधै यस्तै माया अनि जिबन भर को खुसि दिन सक्छु ? तिमिलाई त्यो भए पुग्छ ? केटी मुस्कुराउथिन् अनि ‘पुग्छ’ भन्थिन् ।
एक दिनको कुरा हो त्यो केटी कुनै धनी केटाको नजरमा परिन केटालाई केटि सारै मन पर्यो । उस्ले सँधै उसको पिछा गर्न थाल्यो । पगलपन देखाउन थाल्यो । म तिमि बिना बाच्न सक्दिन, यस्तै यस्तै केटी उस्को ब्याबहार देखेर हैरान भई तर पनि उसले पागल पन देखाउन छोडेन । सँधैँको झनझट भन्दा माया गर्छु भनिदिन्छु कुरै खतम भन्ने सोचले केटीले पनि म माया गर्छु भनिन्, जब उनी धनी केटासंग भेट्न गईन् । उस्ले हाम्रो पहिलो भेटको उपहार भनेर उन्लाई ४/५ तोला सुनको सिक्रि दियो उनले पनि स्वीकारिन् । दुबै खुसिका साथ भेट्दथे, माया साटासाट गर्दथे ।
समय चल्दै गयो यसै गरि उनि गरिब आफ्नो प्रेमिसंग पनि मिल्न जान्थिन् । उनको हर पटक शरिरमा एक न एक नयाँ सामान देखेर प्रेमिले एकदिन सोध्यो, सानु यस्तो महंगो सामान कस्ले दीयो रु सायद म कहिले दिन सक्दिन होला तिमिलाई । पैसाले सबै थोक किन्न सके पनि सुख शान्ति अनि चोखोनिन्द्रा कहिल्यै किन्न सक्किन, मेरो घरमा खानलाई ढेँडो पाक्छ तर पनि मिठो निन्द्रा लाग्छ । सपनि देख्नलाई बिस्तारा होईन, निन्द्रा चाहिन्छ । केटी मुस्कुराउथिन मात्र समय बित्यो धनि केटाले देखाएको मायाले गरिबको मायालाई पछाडि पार्यो । उनले बिस्तारै त्यो पुरानोप्रेमि लाई भेट्न छोडिन्।
त्यो धनी केटासंग उनले बिहे गर्ने भईन् । यो कुरा गरिब केटाले चाल पायो । उस्ले अन्तिम पल्ट भेट्छु भनेर बोलायो । केटी गईन केटा मुस्कुराउदै भन्यो, राम्रो गरेउ तिमिले जिबन जिउनका लागि माया मात्र काफि छैन जुन तिमिमा देख्दै छु। म तिम्रै खुसि देख्न चाहाने मान्छे हुँ। तिमि खुसि हुनु तिमि महलमा बसेर मिठो परिकार खाउलि तर म झुप्रोमा बसेर ढिँडो खाएर नै संतोक गर्छु ।
तिमि मखमलको बिस्तारामा निदाउलि तर म गुन्द्रिमा सुतेर नै मिठो सपना देख्न सक्छु । तिम्रो नयाँ जिबनलाई शुभकामना। केटाले जाने बेलामा आँशु झार्यो अनि भन्यो मलाई बिर्से पनि यो आँशुलाई कहिले पनि न बिर्सनु । यो मेरो उपहार हो तिमिलाई । गरिबसंग हुने यहि एउटा मात्र अमुल्य उपहार हो लैजाउ।
केटि केहि बोलिनन् । गईन, उनको बिहे भयो । पहिले त राम्रै थियो केटाले पनि माया गथ्र्यो । बिबाहपछिका दिन बित्दै गयो । केटा रक्सि पिएर दिनहु झगडा गर्न थाल्यो । तँ यस्तो उस्तो तेरो पहिलो प्रेमिसंग जा यस्तै हुदो न हुदो कुरा गर्दै उस्लाई पिट्न थाल्यो। दैनिक यस्तै सहनै नसके पछि उनले त्यो घर छोडिन् । अनि माईति मा बस्न लागिन । अब न उन्सिंग रुप थियो न जवानि नै, न त ईज्जत नै । सबै लुटिएको थियो । बल्ल उनलाई पुरानो प्रेमिले झारेको आँशु याद आयो । उसको हर कुराको याद आयो । रक्सि खाएर दिन रात कुटाई खाएर महलमा बस्नु भन्दा ढिँडो खाएर झुप्रोमा मायालुको अंगालोमा निदाउनु जातिरहेछ।
उनी रुन्थिन्, जिबन सहनै गाह्रो भयो । उनलाई एक दिन मर्छु भनेर उनी घर छोडेर राति नजिकैको चौतारामा पासो लगाउन गईन् । उनी सबै सकेर पासोलगाउन मात्र लागेकि थिईन् । कसैले सानु भनेर बोलायो उनी पछाडि फर्किन त उनको पुरानो प्रेमि रहेछ । उनलाई खपि नसक्नु भयो । उस्को अंगालोमा बसेर धेरै रोईन् । अनि केटाले भन्यो म तिमि पछिको दिन हरुमा सधैं यो एकान्त चौतारामा बसेर रात बिताउथे । सुर्य उदाउदा मेरो सानुको दिन राम्रो बितोस भनेर कामना गर्थे । रात पर्थ्यो मिठो सपनिको कामना गर्थे सधै तर आँशु कैले झारिन। आज सबै दुःख पाए पछि बल्ल मेरो मायाको काबिल भएर आएकिछौ । अनि मेरो उपहार आँशु साथ लिएर आएकि छउ । म खुसि छु कि तिमिले मेरो उपहार फिर्ता गरेउ।
मेरो झुपडिमा बसेर सपना देख्न सक्छौ भने, तिम्रो पेट भरिन्छ भने म तिमि संग जिबन बिताउन तयार छु। उनले पनि खुसि कासाथ उसको साथ दिईन्। साँचो माया गर्नेहरुको सपना एक न एक दिन अवस्य पुरा हुन्छ । ढिलो या चाँडो मात्रहो आफ्नो मायामा बिस्वास गर्नअनि आफुमा बिस्वास गर्न सक्नु पर्छ होईन र मित्रहरु माया गर्न हैन चिन्न सिकौ ।
भानु जयन्तीमा राष्ट्रियस्तरको कविता प्रतियोगिता